सरकारले भोलिदेखि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउने, भोलि ३ सय नेपाली आउँदै – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/सरकारले भोलिदेखि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउने, भोलि ३ सय नेपाली आउँदै
काठमाडौं, २२ जेठ । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा भोलि शुक्रबारबाट उद्धार सुरु गर्दैछ ।भोलि संयुक्त संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), म्यानमार र श्री एयरलाइन्सले भारतबाट नागरिक स्वदेश ल्याउने भएको हो । यसरी उद्दार गरिएकालाई सरकारले प्रदेशगतरुपले विभिन्न पार्टी प्यालेसमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा राख्नेछ ।त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार म्यानमारबाट ४१ जना नागरिक स्वदेश ल्याइँदैछ भने २६ जना लगिँदैछ ।
यस्तै, श्री एयरलाइन्सले १५ जनालाई भारतको नयाँ दिल्ली लानेछ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स्बाट नेपाली ल्याइने भएको छ ।यसरी भोलि शुक्रबार ३ सय नेपाली स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन् । श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कतार, मलेसिया, साउदी अरव, यूएई, बहराइन र ओमानबाट जम्मा ३९ हजार ४ सय २० जनाको उद्दार गरिँदैछ ।जसमध्ये यूएईबाट १७ हजार ३ सय ७५ जना, कतारबाट ८ हजार ३ सय ७० जना, साउदी अरबबाट ६ हजार ५ सय ४४ जना , मलेसियाबाट ६ हजार २ सय, ओमानबाट ६ सय ५६, बहराइनबाट २ सय ८५ जना र कुवेतबाट आममाफी पाएका ३ हजार र अन्य ५ हजार नेपाली फर्किनेछन् ।
उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेनाको उपत्यका पृतनाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गरेको छ। दुई वटा होल्डिङ सेन्टर रिजर्भ राख्ने गरी तीन जिल्लामा नौ वटा होल्डिङ सेन्टर तय गरिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए। जसमा काठमाडौंमा एउटा रिजर्भसहित चार, ललितपुरमा एउटा रिजर्भ सहित तीन र भक्तपुरमा दुई वटा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। काठमाडौंमा तयार गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा बागमती, गण्डकी र प्रदेश ५ का व्यक्तिहरूलाई राख्ने तय भएको छ।
त्यसका लागि काठमाडौको बसुन्धरामा कुन्डलिनी पार्टी प्यालेस, यति पार्टी प्यालेस, सुकेधारमा स्काई जोन पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टर तोकिएको छ। यी होल्डिङ सेन्टरमा अत्याधिक मान्छे भएमा सुकेधारामा नै मिराकल पार्टी प्यालेसलाई रिजर्भको रूपमा राखिएको छ। भक्तपुरमा प्रदेश १ र २ का नागरिकलाई राख्ने गरी होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। त्यसका लागि इम्पेरियल पार्टी प्यालेस सुर्यविनायक र हेरिटेज प्यार्टी प्यालेस ठिमीलाई होल्डिङ सेन्टर तोकिएको छ। ललितपुरमा ६ र ७ प्रदेशका नागरिकलाई राख्ने गरी डिलाइट पार्टी भेन्यू महालक्ष्मी थान, मण्डला पार्टी भेन्यू ग्वार्कोलाई होल्डिङ सेन्टर तोकिएको छ।
सिद्धार्थ कजेट धोवीघाटलाई रिजर्भ होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। यी होल्डिङ सेन्टरहरूमा विदेशबाट आएका नेपालीलाई बढीमा एक रात राखिन्छ। पाण्डे भन्छन्, “होल्डिङ सेन्टरमा हामी धेरै समय राख्दैनौं। उस्तै परे बढीमा एक रात राख्छौं। सकेसम्म छिटो त्यहाँबाट प्रदेशस्तरीय क्वारेन्टाइनमा पठाउने हाम्रो तयारी छ।” एउटा होल्डिङ सेन्टरमा एक दिनमा बढीमा दुई देखि तीन हजारसम्म मान्छे लिने गरी नेपाली सेनाले तयारी गरेको छ। विदेशबाट आएका नेपालीलाई विमानस्थल उनीहरूले भरेको स्वास्थ्य लगायत अन्य विवरण परीक्षण गरेर तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा पु¥याइन्छ। त्यहाँ उनीहरूलाई केही बेर रिफ्रेस हुन दिइन्छ।
त्यही नेपालको मोवाइल नम्बर नभएकाहरूका लागि नेपाल टेलिकमको सीमकार्ड दिइन्छ र सोही मोवाइल नम्बरको आधारमा उसको ट्रयाकिङको व्यवस्था मिलाइन्छ। होल्डिङ सेन्टरमा हुँदा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेशन डाउनलोड गर्न लगाइने तयारी छ। पार्टी प्यालेसमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा बेडहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। तर, विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि ती बेड तयारी गरिका भने होइनन्। होल्डिङ सेन्टरमा लामो समयसम्म बस्नु परेको अवस्थामा त्यही खानाको व्यवस्था पनि छ। एक जनालाई एक सय ७५ रूपैयाँ बराबरको खाना उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रीपरिषदले यसअघि नै गरिसकेको छ।
चीनले कोरोनाको खोप ल्याउँदै, कति पर्ला मूल्य ? पढेर शेयर गर्नुहाेस्
एसईईको नतिजा भर्खरै सार्वजनिक, को-को भए उत्तिर्ण ? यसरी हेर्नुहोस्